Kooxda Isbuuca Ee Serie A: Milito Iyo Jovetic Oo Hogaaminaya 11ka Ciyaaryahan Ee Ugu Fiicnaa. - jornalizem
Kooxda Isbuuca Ee Serie A: Milito Iyo Jovetic Oo Hogaaminaya 11ka Ciyaaryahan Ee Ugu Fiicnaa.
Serie A ayaa dib u soo laabatay isbuucaan iyadoo sabtidii iyo axadii la ciyaaray kulamo xiiso leh oo mudnaa in la daawado, waxaana jiray ciyaartoy heer sarre ah oo ka dhex muuqday. Inter iyo Napoli ayaa labadoodaba iyagoo marti ah guulo waa weyn gaaray, waxaana ay labada kooxoodba ku leeyihiin ciyaaryahano kooxda isbuuca Serei A, halka Sampdoria iyo Lazio ay sidoo kale ciyaaryahano ku leeyihiin ka dib guulo ay ku soo gaareen iyagoo garoonkooda ka maqan, waxaana sideed ka mid ah 11kii ciyaaryahan ee ugu fiicnaa isbuucaan ay ka yimaadeen kooxo marti ahaa.
Laacib.net oo soo xiganeysa shabakada Goal.com ayaa idiin soo gudbineysa ciyaartoydii ugu fiicnaa isbuucaan horyaalka Serie A isbuuciisa koowaad.
Mid ka mid natiijooyinkii sida aadka ah isha loogu haayay waxa ay ka dhacday San Siro, halkaasoo Sampdoria ay guul xusuus leh oo 1-0 ah ka gaartay kooxda Milan. Qeyb ka mid ah guushaas waxa ay ku timid qaab ciyaareedka Sergio Romero goolhayaha Sampdoria. Goolhayaha reer Argentina ayaan la tijaabinin in badan intii uu filayay, lakiin hadana waxa uu qabtay shaqo fiican isagoo fursad qaali ah ka badbaadiyay Mario Yepes, waxaana uu ahaa hogaamiyo daafaca Sampdoria ah.
Kooxda horyaalka difaacaneysa ee Juventus ayaa horyaalka ku bilaabatay si fiican, waxaana ay 2-0 kaga badiyeen kooxda Parma, xilli ciyaareedkii labaad oo isku xigana waxaa goolasha xilli ciyaareedka u furay Stephan Lichtsteiner. Sidoo kalena waxa uu qaab ciyaareed wanaagsan ku soo bandhigay booskiisa daafaca, waxaana daafacyada kooxda todobaadka uu kula biirayaaDanilo oo kabtan u ahaa Udinese maalintaas oo qaab ciyaareed wanaagsan soo bandhigay. Andrea Ranocchia ayaa helay booska ugu danbeeyay ee daafaca kooxda isbuuca, madaama uu qaab ciyaareed fiican kala hortagay kooxda ku cusub Serie A ee Pescara.
Lazio ayaa boqolkiiba 5o ku leh khadkeena dhexe ka dib markii ay guul weyn ka gaareen Atalanta.Stefano Mauri� ayaa hal abuure u ahaa si uusan waligiis u noqonin, halka Andrerson Hernanes uu noqday ninka saxan ee jooga booska saxan iyo waqtiga saxan ee loo baahan yahay, isagoo guusha u sahlay Lazio ka dib qaab ciyaareed shaqsi ah oo aad u wanaagsan markii uu soo bandhigay. Marek Hamsik ayaa isna shabaqa soo taabtay, isagoo sidoo kale caawiye ka ahaa goolkii Maggio iyadoo Napoli ay 3-0 ku badisay. � Kwadwo Asamoah ayaa meeshiisa ka sii waday qaab ciyaareedkii fiicnaa ee uu soo bandhigay Supercoppa Italiana isagoo qabsaday dhanka bidix ee garoonka kulankii Parma, isagoo tartan ugu jira inuu noqdo saxiixa ugu fiican xagaagan.
Dhinaca weerarka waxaa jira rag badan oo laga soo xulan karo, lakiin ma jirto qof qabtay shaqadii uu qabtay Stevan Jovetic. Ciyaaryahanka reer Montenegro ayaa dhaliyay goolkii barbaraha ee kulankii Udinese, ka hor inta uusan goolka guusha u dhalin daqiiqadii 91aad ee ciyaarta isagoo farxad iyo reyreyn ku diray taageerayaasha Viola oo martida loo ahaa. Diego Milito ayaa isna ka muuqday saaxiibkiisa cusub Antonio Cassano, isagoo caawiye ka ahaa goolashii Wesley Sneijder iyo Philippe Coutinho. Waxa uu sidoo kale soo taabtay shabaqa markii uu karoos joog hoose ka helay Cassano, iyagoo 3-0 kaga badiyay Pescara. � Alejandro Gomez ayaa qaatay booska ugu danbeeya isagoo kubad qurux badan soo bandhigay islamarkaana gool qatar ah u dhaliyay Catania xilli ay barbaro 2-2 ah la galeen Roma.